ခက်ခဲသောနည်းလမ်း - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > နေ့-by-နေ့ > အဆိုပါခက်ခဲလမ်း
အကြောင်းမူကား၊ သူကိုယ်တိုင်က၊ "ငါသည် သင်တို့ကို လက်မှမလွှဲလို၍ စင်စစ် သင်တို့ကို မထားခဲ့ချင်ဘူး" (ဟေဗြဲ 13:5 ZUB)။
ငါတို့လမ်းကိုမမြင်ရလျှင်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြသနည်း။ ဘ ၀ တွင်ဖြစ်ပေါ်စေသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲဘဝကိုဖြတ်သန်း။ မရနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံယင်းတို့သည်မခံနိုင်လောက်အောင်များပြားသည်။ ဘ ၀ သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မတရားမှုရှိပုံရသည်။ ဘာကြောင့်အဲလိုပြောရတာလဲ ငါတို့သိချင်တယ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရခက်သည့်အရာများကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးဒဏ် ပေး၍ ၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေးမိသည်။ ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ လူ့သမိုင်းသည်တိုင်ကြားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်၊ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ဤအရာအားလုံးကိုနားလည်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိပညာမရှိသောအခါယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လည်ပေးသည်။ ကျနော်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့်အပြည့်အဝနားလည်မှုကင်းမဲ့ရှိရာယုံကြည်ခြင်းရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်မှုပေးသည်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာမည်သို့ဆက်ဖြစ်သင့်သည်ကိုမမြင်နိုင်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးတည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းရွက်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်ပေးသည်။ မုသာမပြောနိုင်သော ဘုရားသခင်သည် တစ်စုံတစ်ခုကို ကတိပေးသောအခါ၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့ဖြစ်နေပြီဟု ထင်သည်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တွေအကြောင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာပြောသလဲ။ ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သတင်းပို့သည်။ 1. ကောရိန္သု 10:13 စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်း သည် သင်တို့ကို မသိမ်းသေးဘဲ၊ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သစ္စာရှိတော်မူသည်၊ သင်၏အစွမ်းအစထက် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည်မဟုတ်ဘဲ၊ သင်သည် ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် သွေးဆောင်မှုနှင့်အတူ ထွက်ပေါက်ကို ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။”
ဒါကို ထောက်ခံပြီး ထပ်လောင်းရှင်းပြပါတယ်။ 5. ကမ္ဘာဦးကျမ်း 31၊6နှင့် 8 တွင် “ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာနေကြလော့။ မကြောက်ကြနှင့်၊ မကြောက်ကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင်နှင့်အတူ ကြွတော်မူ၏။ သူသည် သင့်ထံမှ သူ၏လက်ကို မဆွဲထုတ်ဘဲ သင့်ကို ထားခဲ့မည်မဟုတ်ပေ။ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သင့်ရှေ့မှာ ကြွတော်မူ၏။ သူသည် သင်နှင့်အတူရှိ၍ သူ၏လက်ကို သင့်ထံမှ မဖယ်၊ မကြောက်နဲ့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။"
ငါတို့ဘာတွေဖြတ်သန်းသွားတယ်၊ ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာအရေးမပါဘူး၊ အမှန်မှာဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့အဘို့လမ်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါ၊
ဒါဝိဒ်သည် Stirk ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်